Fanahiana kolikoly: mitaky fanadihadiana momba ny fanadinana ENMG ny SMM | NewsMada
Fanahiana kolikoly: mitaky fanadihadiana momba ny fanadinana ENMG ny SMM
Tsy afaka ny hangina fotsiny. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny SMM momba ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho mpitsara eo anivon’ny ENMG. “Mitaky ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny sekoly hanatanteraka fanadihadiana lalina ary haingana momba ireo tranga ireo izahay ary hanazava amin’ny olom-pirenena tsy ankanavaka, indrindra ireo mpiadina, ny zava-misy marina ary handray fanapahan-kevitra matotra sy hentitra mahakasika izany fifaninanana izany”, hoy izy ireo, omaly. Nitondra soson-kevitra koa anefa ity sendikà ny hanafoanana tanteraka izany fifaninanana izany hisorohana ny ahiahy rehetra ary ny famerenana azy rehefa hita soritra mazava ny vahaolana maharitra amin’ny fahadiovan’izany fifaninanana izany.
Mitaky ny hanajan’ny kandidà lalàna ny SMM
Momba ny fifidianana kosa, mitaky ny Ceni sy ny minisiteran’ny Fitsarana hanatanteraka ny fanendrena mialoha ireo mpitsara ho filohan’ny SRMV izy ireo. Takin’izy ireo koa ny minisiteran’ny Fitsarana hanomana mialoha ny vola sy fitaovana ary indrindra ireo mpitsara hanatanteraka ny asa, ireo rafi-pitsarana rehetra manana andraikitra amin’ny fikarakarana ny fifidianana. Nitodika amin’ireo kandidà ny SMM mba hanaja amin’ny antsakany sy andavany ireo andinin-dalàna rehetra mifehy ny fifidianana. “Manentana ny rafi-pitsarana manana andraikitra sy mahefa amin’izany hampihatra tsy am-pihambahambana ireo fehezan-dalàna ireo. Natao izao fanambarana izao ho fampanajana sy fampanjakana ny tany tan-dàlana”, hoy ihany izy ireo.
Fiaraha-mitantana eo anivon’ny SMM
Ankoatra izany, nisaoran’ny biraon’ny SMM ny filoha, i Fanirisoa Ernaivo, nametra-pialana noho ny maha kandidà azy amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Hisahana izany asa izany mandra-pahatapitry ny fe-potoam-piasan’ny birao kosa ireo filoha lefitra am-perinasa. Anisan’izany i Jaona Clement sy i Botovolanjara Reagan ary Ralaivao Harisoa Josiane.